लगानी सम्मेलन : अब के गर्नुपर्ला ? « Drishti News
लगानी सम्मेलन : अब के गर्नुपर्ला ?
सम्मेलन पश्चात् नीजि क्षेत्रले खुशी प्रकट मात्र गरेन उत्साहित पनि भयो । नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सस्था उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, गैरआवासीय नेपाली संघ जस्ता सस्थाले प्रशंसा गर्नु सरकारका लागि पनि संजिवनी वुटी जस्तै भएको छ । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले सम्मेलनलाई “ग्राण्ड सक्सेस” भन्नु, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टले नेपाल लगानीको गन्तब्य भएको महसूस गर्नु, परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सम्मेलनले लगानीका लागि ब्राण्डिङ्ग गर्न सफल भएको कुरा गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै गतिलो सन्देश प्रवाह हुन सकेको छ । कतिपय ब्यावसायिक ब्यक्तिको अभिब्यक्तिले त तिर्खा लागेको अवस्थामा एक घुट्को पानीको जस्तो महत्व हुन्छ भन्ने लागेको छ ।
सरकारले ७७ वटा आयोजनाहरु सोकेशमा राखेको थियो । यसको अर्थ ती सवै आयोजनाप्रति लगानीकर्ताहरु अहिलेनै भेटिन्छन् भन्ने हैन, खोज्दै आउनेलाई जतिवेला पनि प्रस्ताव गर्न सकिने भएको छ । अव उनीहरुको चाहना अनुसार हैन हाम्रो आवश्यकता अनुसारका परियोजनाहरु सञ्चालनमा आउन सक्नेछन् । तत्कालका लागि १२ खर्व १५ अर्वका १७ वटा आयोजनामा लगानी गर्ने समझदारी भएको छ । यो चानेचुने कुरा हैन । नेपाललाई संसारकै सर्वोत्कृष्ट लगानीको केन्द्र बनाउन सकिने सन्देशलाई आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपाल साँच्चिकै समृद्ध बन्नेछ ।
ब्यवसायीहरु एक अर्थमा सरकारको निर्णय कुरेर वसेको अवस्थामा थिए । यद्यपि, सरकार त्यति धेरै कठोर थिएन तर, प्रतिपक्षले त्यसप्रकारको माहौल खडा गर्दै थियो । अर्थात् नियन्त्रित अर्थतन्त्र र अधिनायकवाद कम्युनिष्टका चरित्र हुन् भन्नका लागि कांग्रेसले कुनै कसर बाँकी राखेको थिएन । उदार अर्थतन्त्रको अर्थ नबुझेर हैन बुझपुचाएर यो सव गरिएको थियो ।